Dhirta baakad khudaarta cagaaran had iyo jeer waxay ku qaataan biyo fara badan. Badanaa tani waxay ku kacdaa kharashyo badan, iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay sababaan biyo yarida iyo baahida loo qabo in la tuuro biyaha wasakhda ah. Gaar ahaan dhibaatooyin fara badan ayaa soo baxa haddii biyuhu qulqulaan oo leh cusbo aad u sarreysa waxaana sidoo kale lagu gartaa waxyaabaha ay ku badan tahay maadooyinka adkaha ah, taasoo keenta xanaaq badan.
Shirkado badan ayaa doonaya inay yareeyaan isticmaalkooda biyaha oo ay khasaaraan kharashaadka ku baxa biyaha iyagoo diida biyahooda. Dhibaatada ugu weyn ee habkan ayaa la xiriirta baahida loo qabo in la nadiifiyo dareeraha, iyo gaar ahaan, kala-goynta walxaha adag. Sida caadiga ah, in kabadan 90% waxyaabaha qulqulka qulqulka ayaa leh cabir yar - baaxadda 2-50 micron, waana adagtahay in la kala saaro, iyadoon loo eegin qaabka kala sooca ama shaandhaynta.
Dhaqan ahaan, nadiifinta biyaha ee bakhaarada baakadaha waxaa lagu sameeyaa iyada oo la adeegsanayo kala sooca cufnaanta (caddeeyayaasha). In kasta oo ay wax ku ool yihiin, caddeeyayaashu waxay u baahan yihiin dhul ballaaran oo aad qaali u ah. In kasta oo xalalka kale (aaladaha ka saaraya walxaha isticmaalaya xoogga centrifugal: tusaale ahaan, hydrocyclones) waxay muujinayaan natiijooyin ka sii xun: waxay awoodaan inay kala saaraan kaliya walxaha waaweyn (in kabadan 70 micron), iyo sidoo kale cufnaan (in ka badan 1,9 g / cc) , waxaana badanaa loo istcimaalaa bilowga ciid (wax ka yar 2% oo ah walxaha adag). Intaa waxaa u dheer, xawaaraha sare ee wareegga qulqulka qulqulka biyaha waxay ka hortagtaa geedi socodka isku-darka iyo isku-soo-baxa.
Kala-sooca cusub ee hydrodynamic-ka ee Natica ee la abuuray, oo ay soo saartey AquaHD, ayaa ka xor ah xaddidaadaha hannaanka kala-goysyada qayb ahaan qayb ahaan. Natica waxay u shaqeysaa iyadoo la abuurayo xoogag dhexe oo u kala baxa walxaha cadaadiska hoose leh (1 bar).
Natica gudaheeda, biyuhu waxay ku qulqulayaan qaab wareegsan oo gaar ah. Marinka biyuhu marayaan qaab dhismeedka wareegga ayaa kuu oggolaanaya inaad abuurto xoogag sarreeya oo sarreeya (6-8 G) oo cadaadis hoose leh. Sababo la xiriira ciidamada sare ee sarreeya, walxahaas ayaa ku urursan hareeraha bannaanka ee soocayaha. Sababta oo ah socodka laminar-ka, walxaha ku jira waxay ku sii jiraan lakabka sare ee wareegga oo ha ku dhex darin biyo saafi ah gudaha aaladda. Naqshad gaar ah oo calaamadaysan ayaa ka soocaya durdur ay qani ku yihiin walxaha (u dhaw hareeraha wareega) iyo durdur biyo saafi ah. Walxaha laga soo saaray biyaha waxaa lagu sii waari doonaa iyadoo la dhimayo oo dib loo dhigo wasakhda, halkaas oo biyaha loogu diri doono bilowga hawsha. Sawirka hoose wuxuu sharraxayaa sida Natica u shaqeyso:
Biyo-xireennada sare ee biyaha wasakhda awgeed, AquaHD waxay dhowaantaba ku rakibday nadiifinta biyaha iyo nidaamka dib-u-warshadaynta xirmooyinka karooto ee gudaha Israel.
Kaydinta, biyuhu waxay si isdaba joog ah uga maydhaan wasakhda (dhowr ilbiriqsiyo kasta oo daqiiqado ah) godka loogu talo galay waxayna ku noqoteen madaxa wasakhda si loogu rariyo cuntada. Markii waxyaabaha adkaha ah ee ku jira godku ay noqdeen kuwa aad u sarreeya (maalmo kasta), dareeraha ayaa laga soo qoday ceelka waxaana lagu daray biyo cusub.
Nidaamka AquaHD waxaa lagu rakibay meel u dhow ceelka oo si joogto ah ayaa looga soo tuuray ceelka, waxaa la nadiifiyey oo ay biyo nadiif ah godka uga dirtay madaxa weelka dhaqa. Qaab-dhismeedka ayaa suurtageliyay sii socoshada hawlgallada ceelka iyada oo aan loo baahnayn in si isdaba-joog ah loogu beddelo biyaha ceelka, taasoo horseeday in qulqulka biyaha badan ee qashin-qubka culus si qulqulaya bullaacadda bulaacadda.
Jaantuska hoose wuxuu muujinayaa natiijooyinka socodsiinta:
Qalabka waxaa lagu rakibay kaydinta meel bannaan oo kooban (gudaha dhismaha ka jira) iyadoon faragelin lagu samayn hawl maalmeedka khadadka baakooyinka.
Sida aad arki karto, Nidaamka kala sooca AquaHD wuxuu awooday inuu gaaro wax ku ool tayo sare leh (ka badan 90%) wuxuuna soo saaray biyo tayo sare leh iyadoon loo eegin qaabka dareeraha gudaha. Isku-darka iyo qaab-dhismeedka nidaamka ayaa kiciyaha biyuhu ka dhigayaa xalka ku habboon xirmooyinka dukaamada doonaya inay ka baaraandegaan qulqulka biyaha ee qulqulka bulaacadaha, deegaanka ama doonaya inay dib u isticmaalaan biyaha.
Tags: nadiifinta biyahadib u isticmaalida biyahaxirmooyinka xirmooyinka
Gobolka Bryansk waa Maalinta Field-Day